कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार ६गते सुक्रबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार ६गते सुक्रबारको राशिफल !
प्रकाशित : बिहिबार, असार ०५, २०७६२२:३२ पब्लिक आवाज /संवाददाता
आज तपाइँ अतिशय संवेदनशीलताको अनुभव गर्नु हुनेछ । जस कारण कोही द्वारा तपाइँको भावनामा झट्का लाग्नेछ । घर या जमिनको दस्तावेज आज नगर्नु होला । मानसिक व्यग्रतालाई टाढा राख्नको लागी आध्यात्मिकता, योगको साहारा लिनु होला । स्त्री एवम् पानीबाट टाढा रहनु होला ।
आज तपाइँको मनमा ज्यादा संवेदनशील एवं भावुक्ता भरिएका विचारहरु आउनेछन् जसले मन द्रवित हुनेछ । आफ्नो कल्पना शक्तिले तपाइँ सर्जनात्मक काम गर्न सक्नु हुनेछ । कुनै आकस्मिक कारणले प्रवासको सम्भावना छ ।
आफन्तजन तथा मित्रको साथको भेटघाटले आनन्दको अनुभव गर्नु हुनेछ । आर्थिक योजनामा थोरै समस्या भएता पनि पछि सजिलै संग कार्य पुरा गर्न सक्नु हुनेछ । नोकरी धन्दामा अनुकूल वातावरण रहनेछ । मित्रको सहयोग मिल्नेछ ।
आजको दिन चिन्ता रहित र खुसीपूर्वक बित्नेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ विशेष समय आनन्दपूर्वक व्यतित गर्नु हुनेछ । कार्यमा सफलता र यश मिल्नेछ । नौकरी पेशा गर्नेहरुको लागी नोकरीमा लाभ हुनेछ । साथी कार्यकर्ताको सहयोग मिल्नेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । प्रतिस्पर्धीको चाल निष्फल जानेछ ।
महिलाको विषयमा विशेष ध्यान राख्नु होला । वाणी व्यवहारमा समसाम राख्नु होला । तन मन देखि स्वस्थ रहनु हुनेछ । आन्तरिक सृजनात्मकताले नयाँ स्वरुप प्रदान गर्न सक्नेछ । प्रिय व्यक्तिको साथ सुखद भेटघाट रहनेछ । सन्तानको प्रगतीको समाचार मिल्नेछ । विद्यार्थीको लागी निकै राम्रो समय छ । केही पुण्य कार्य हुनेछ । आध्यात्मिकवृत्ति बढ्नेछ ।
आज तपाइँ थोरै प्रतिकुलताको साथ तैयार रहनु पर्नेछ । स्वास्थ्य ठिकै रहनेछ । मन पनि चिन्तित रहनेछ । माताको साथको सम्बन्धमा थोरै चिसोपन आउन सक्दछ । अथवा उनको स्वास्थ्यमा खराबी आउन सक्नेछ । स्वजनको साथ उग्र वादविवाद हुँदा मनमुटाव हुनेछ । स्वाभिमान भङ्ग नहोस् यसको ख्याल राख्नु होला । पानीबाट भय रहनेछ ।
आज निर्धारित कार्य सजिलै पुरा गर्न सक्नु हुनेछ । धार्मिक या मांगलिक अवसरमा उपस्थित हुनु हुनेछ । तिर्थ यात्राको योग छ । क्रोधमा काबु राख्नु होला । क्रोधको कारण कार्यालयमा मनमुटाव हुन सक्दछ ।
आज तपाइँको मन केहि चन्चल रहनेछ । जस कारण तपाइँलाई निर्णय लिन केहि समस्या हुनेछ । यस कारण कुनै महत्वपूर्ण कार्य गर्न सक्नु हुँदैन । प्रतिस्पर्धीको सामना गर्नु पर्नुका साथै नयाँ कार्य गर्ने प्रेरणा पनि मिल्नेछ । कुनै बौद्धिक या तार्किक चर्चामा भाग लिनु हुनेछ । छोटो यात्रा हुने सम्भावना छ । स्त्री वर्गले वाणीमा नियन्त्रण राख्नु पर्नेछ । साहित्य लेखनको लागी राम्रो दिन रहेको छ ।
आज आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ध्यान राख्नु होला । कफ, स्वास र पेटमा समस्या आउन सक्दछ । शारीरिक र मानसिक रुपले अस्वस्थ रहनु हुनेछ । क्रोधमा नियन्त्रण राख्नु होला । पानीबाट टाढा रहनु होला । खर्च अधिक हुनेछ ।
आजको दिन सुख शान्ती र आनन्दमा बित्नेछ । मित्रको साथ राम्रो दिन बित्नेछ । स्वादिष्ट भोजन तथा नयाँ वस्त्र प्राप्त हुनेछ । विपरीत लिंगीय व्यक्ति प्रति विशेष आकर्षण रहनेछ । उनीहरुको साथको भेटघाट रोमाञ्चक हुनेछ । आज तपाइँको विचार स्थिर रहँदैन । भागेदारीमा लाभ हुनेछ । सार्वजनिक जिवनमा मान-सम्मान मिल्नेछ ।
धनको आय आत्य र व्यय अधिक हुनेछ । आँखाको पिडाले निराश हुनुहुनेछ । मानसिक चिन्ता पनि रहनेछ । मध्याहन पश्चात समस्यामा परिवर्तन आउनेछ । आर्थिक दृष्टिले लाभ हुनेछ । शारीरिक र मानसिक परिस्थितिमा सुधार हुनेछ । पारिवारिक वातावरण आनन्दप्रद रहनेछ ।
क्रोधले हानी हुने सम्भावना छ । शारीरिक र मानसिक अस्वस्थताको कारण चिन्तित रहनु हुनेछ । व्यावसायिक क्षेत्र शिर्ष अधिकारीको व्यवहार नकारात्मक रहनेछ । सन्तानको प्रश्नको विषयमा चिन्ताले सताउनेछ । महत्वपूर्ण कार्यमा कुनै ठोस निर्णय नलिनु होला । आज कुनै नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु होला ।
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २७ गते शुक्रबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक ०८ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेष्ठ ८ गते बुधबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २०, सोमबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २ गते बिहीबारको राशिफल !